देश साइट डिजाइन मालिकको धेरै समय आवश्यक छ। तर, परिणाम सबै आशा पार गर्न सकेन। सफलतापूर्वक चढाई गुलाब को परिदृश्य डिजाइन मा हेर्न। लगभग आफ्नो प्रजाति सबै ठूलो तन्तु र धेरै पटक सिजन ब्लूम। यो सुन्दर प्राकृतिक सजावट उपनगरीय क्षेत्र।
будут представлены далее) является одним из лучших представителей вида. चढाई (, समीक्षा फोटो तल देखाइएको छ) क्यासिनो गुलाब प्रजाति को सबै भन्दा राम्रो प्रतिनिधिहरूलाई छ। यो बोट को हेरविचार र वर्षा लागि विशेष आवश्यकताहरु छ। साइटमा विभिन्न वस्तुहरु संग सजाया अद्भुत गुलाब गर्न, यो यसको विशेषताहरु थाहा आवश्यक छ।
आरोहण गुलाब विभिन्न प्रकारका हुन सक्छ। तिनीहरूले संग बिरुवाहरु विभाजित छन् साना फूल (Rambler) र ठूलो तन्तु (klaymingi)। तिनीहरूले5मीटर को एक उचाइ छ। पहिलो मामला मा, तन्तु पुरानो काठ मा ब्लूम र दोस्रो - हालको वर्ष शाखा मा।
लोकप्रिय truckers बीचमा ती प्रजातिहरू को गर्मी भन्दा धेरै पटक ब्लूम छन्। представлены далее). उज्ज्वल प्रतिनिधि klaymingov (समीक्षा, फोटो तल देखाइएको) एक चढाई गुलाब क्यासिनो छ।
एक ठूलो पहेंलो तन्तु यो बोट। यो दुई पल्ट गर्मी भन्दा blooms। प्लान्ट लम्बाइ4मीटर सम्म शुट। खैरो पात र उच्चारण ठूलो ढाड पनि यो एक पहिचान गुलाब छन्। धेरै माली यो कुनै पनि बगैचा लागि पहेंलो गुलाब को सबै भन्दा राम्रो तरिका हो भनेर सहमत हुनुहुन्छ।
представлено в обзоре) была выведена в 1963 году в Ирландии. गुलाब क्यासिनो पर्वतारोही (फोटो यो समीक्षा मा प्रस्तुत) आयरल्याण्ड मा 1963 मा विकास भएको थियो। फूल आकारको चश्मा छन्। तिनीहरूले कागति रंग मा चित्रित छन्। सबैभन्दा सुन्दर देखिन्छ पहिले नै तन्तु blooming। बाहिरी पात एक फिक्का रंग छ। केन्द्रीय सानो पात तिनीहरूलाई विपरीत। 10 सेमी व्यास inflorescence अप। फ्रेग्रेन्स तन्तु संतृप्त। यो fruity टिप्पणीहरू छ।
फूलहरू पहिलो फूल मा एकांतर देखिन्छन्। यो तिनीहरूले गुलाब संकर चिया गर्न समान छन्। पटक-पटक फूल तन्तु पनि ब्रश देखिन्छन्। यो indescribably सुन्दर दृष्टि छ।
представлены в статье) достигает в высоту4м, а в ширину –2м. Куст ее прямостоячий. गुलाब क्यासिनो पर्वतारोही (समीक्षा, फोटो लेख मा प्रस्तुत छ),4मीटर को एक उचाई र अधिकतम चौडाई पुग्छ -2m स्क्रब यो ठाडो .. हाँगाविँगाको चमकदार र गाढा छ। यो भिन्नता, कागति तन्तु हेर्नुहोस्।
о которой помогут оценить всю прелесть этого растения, должна быть посажена на видном месте. गुलाब क्यासिनो पर्वतारोही, फोटो, वर्णन, जो यस बोट को सौन्दर्य बुझ्न मदत समीक्षा एक conspicuous ठाउँमा लगाए गर्नुपर्छ। तिनीहरूले रमाइलो गर्न आवश्यक छ। सबै को सबै भन्दा राम्रो, गुलाब झाडी घर देख्न हुनेछ भने।
यो बोट सूर्य प्रेम गर्नुहुन्छ। त्यसैले, जब यसको रोपण लागि ठाउँ छनौट आवश्यक यो अवस्था सुनिश्चित छ। तर, प्रत्यक्ष सूर्यका पनि यसलाई हानिकारक, साथै प्रकाश को अभाव छ। तसर्थ, ध्यान दिएर स्थान को सर्वोत्कृष्ट भेद छलफल गर्नुपर्छ।
गुलाब क्यासिनो बिहान वा साँझको घामको रुचि। को घरेलु दक्षिणी क्षेत्र मा स्थित छ भने, तन्तु लागि पर्याप्त सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्छ। प्रत्यक्ष सूर्यका फूल समूहहरु को पत्रदल मा बल्न नेतृत्व हुनेछ।
रोपण गुलाब लागि एक ठाउँ राम्रो ventilated गर्नुपर्छ। यो कम स्थानको लागि उपयुक्त छैन। त्यहाँ एक गुलाब रोपेर छ भने, यो चोट हुनेछ।
смотри ниже в статье) требует правильного выбора почвы. गुलाब क्यासिनो पर्वतारोही (समीक्षा, फोटो, यस लेखमा पछि हेर्नुहोस्) माटो को सही चयन आवश्यक छ। धरण यो मामला मा सबै भन्दा राम्रो विकल्प मानिन्छ। पनि loamy माटो मा बोट रोपेर दिनुभयो। तर, यो उहाँलाई जैविक मल को प्रकार गर्नेछ।
क्षेत्र मा भूमिगत उठाने स्तर 1 मिटर भन्दा बढी हुँदैन। यो क्षेत्र ढलान थियो मनमोहक छ। यो माटो को swamping रोक्न हुनेछ।
यो माटो अम्लता को प्रकारको साइटमा उपस्थित के थाहा महत्वपूर्ण पनि छ। रोजा प्रजाति अलिकति अम्लीय माटो रुचि प्रतिनिधित्व। यस मामला मा ph स्तर वरिपरि 6-6.5 अंक हुनुपर्छ। यो अवस्था वास्तविक अवस्था अनुरूप छैन भने, माटो acidify गर्न सक्नुहुन्छ। यो गर्न, यो पीट मश वा मल थप्न। अतिरिक्त एसिड माटो खरानी मा शुरू द्वारा हटाइएको छ।
गर्न बिरुवाहरु को जरा घर को पर्खालहरु नजिकै लैंडिंग समयमा समाप्त गर्न गरिन्छ, बोट नजिकै गुलाब 50 सेन्टीमिटरको दूरी मा अन्य बोट हुँदैन छैन कम 60 भन्दा सेन्टीमिटरको दूरी मा उनको हुनुपर्दछ।।
которой помогут оценить красоту этого растения, требует правильного выбора времени посадки. गुलाब क्यासिनो पर्वतारोही, फोटो र विवरण यस बोट को सौन्दर्य बुझ्न मदत गर्नेछ भन्ने रोपण समय सही विकल्प आवश्यक छ। vegetatively मात्र प्रचारित फूल। यो विशिष्ट वर्ण कायम गर्न आवश्यक छ। घरमा, रोपण लागि cuttings पहिलो फूल झाडी पछि सकिन्छ।
समशीतोष्ण क्षेत्रमा सेप्टेम्बर को अन्तिम दशक वा अक्टोबर को पहिलो हप्तामा एक गुलाब रोपेर गर्न सिफारिस गरिएको छ। यस मामला मा पहिलो जरा को चिसो अघि हुनेछ। सक्रिय वसन्त मा बिरूवा विकास। बढ्न shrub राम्रो समय फूल को समयमा।
वसन्त मा व्यायाम लैंडिंग भने, फूल बारेमा 15 दिन द्वारा ढिला हुनेछ। यस मामला मा, गुलाब थप हेरविचार आवश्यक हुनेछ।
अनुभवी माली ल्याण्डिङ कुनै पनि समस्या बिना बाहिर छ बिरुवाहरु प्रतिनिधित्व गर्ने दाबी गर्छन्। तर, सिफारिसहरू एक नम्बर पालन गर्न आवश्यक छ। производится высадка, следует учитывать при проведении этого процесса) высаживается достаточно быстро, если работы выполнять вместе с помощником. तपाईं एक सहायक काम भने गुलाब क्यासिनो पर्वतारोही (एक अवतरण क्षेत्र बनेको छ लागि, यो प्रक्रियामा खातामा लिएको हुनु पर्छ), छिटो लगाए।
पहिले एक पिट (लगभग 60 सेमी) उत्खनन गर्न आवश्यक छ। यसको तल जल प्रसार 10 सेमी को एक मोटाई संग (चोट पत्थर, रोडा) यसबाहेक, प्वाल भरिएको छ धरण मा।। यो भूमि संग मिश्रित गर्न सकिन्छ। यो पत्र पनि 10 सेमी छ। त्यसपछि बगैचा राम्रो माटो मा हालिएको।
माटो माटो पानी ठूलो रकम संग मिश्रित हुनुपर्छ। मिश्रण बोट जरा कम र तिनीहरूलाई सीधा छ। माउन्ट भएको तयार प्वाल मा उठ्नुभयो। मूल कलर जमीन स्तर तल3सेमी थियो भनेर एउटा व्यक्ति बुश धारण। दोस्रो तरिकाले बिस्तारै भुइँमा छिडकना थियो। छाडा माटो अलिकति पनि जरा वरिपरि compacted गर्नुपर्छ। अर्को, तपाईं मूल मा गुलाब जल गर्न आवश्यक छ। माटो prosyadet भने, तपाईं यसलाई फेरि थप्नु पर्छ।
सबै को पहिलो, यो यी फूल बजार मा र विशेष राज्य फारमहरु छैनन् खरिद गर्न सबै भन्दा राम्रो छ भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ, Ornamental बागवानी (एसडीएस)। आज, बजार यी कम्पनीहरु देखि प्रस्तावहरू धेरै र उत्पादनहरु को विकल्प साँच्चै विशाल छ। खरिद र क्यासिनो गुलाब पर्वतारोही, एसडीएस जस्तै बोट गर्न प्रस्ताव। садоводов свидетельствуют о необыкновенно высоком качестве растений, которые они приобретали в подобных совхозах, что, несомненно, может и облегчить уход за описываемым кустом. समीक्षा माली तिनीहरूले यस्तो स्थिति फारमहरु, पक्कै र वर्णन झाडी लागि सुविधा गर्न सक्छन् जो हेरविचार मा प्राप्त जो असामान्य उच्च गुणवत्ता बिरुवाहरु, देखाउँछन्।
यसलाई गुलाब क्यासिनो जस्तै कालो स्थान र powdery फफूंदी रूपमा रोगहरु गर्न मध्यम प्रतिरोधी छ कि टिप्पण लायक छ। तथापि, यस प्रकारको वृद्धि समयमा आवधिक निवारक मर्मतका आवश्यक छ।
हेरविचार सामा हटाउने, र पनि छाँट्ने पूरा र परिचय fertilizing, माटो एक क्रमबद्घ loosening समावेश छ। वसन्त मा माटो नाइट्रोजन संग fertilized र गर्मी मा - पोटासियम र फस्फोरस। यो रसीला फूल झाडी बढावा।
सुक्खा अवधि मा, हजारी धनी गरिनु पर्छ। प्रति दाखको बोट तन्तु अगस्ट प्रारम्भिक गर्न pruned को पहिलो वर्ष मा। प्रारम्भिक फूल जवान बिरुवाहरु लागि प्रतिकूल कारक हो। अगस्ट मा, तपाईं प्रत्येक शूटिंग मा केहि तन्तु छोड्न सक्नुहुन्छ। तपाईं पनि गुलाब गुणस्तरीय समर्थन सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यो एक भ्काडी, कट्टर, स्तम्भहरू र एम। डी को बोट देखाइएको हेरविचार लागि सबै आवश्यकताहरु प्रदर्शन हुन सक्छ, उच्च decorativeness चढाई क्यासिनो गुलाब हासिल गर्न सक्नुहुन्छ।
за которой требуют соблюдения некоторых правил, нуждается в обрезке. गुलाब क्यासिनो पर्वतारोही, रोपण र हेरविचार जो छाँट्ने चाहिन्छ भनेर केही नियमहरू अनुपालनको आवश्यक पर्दछ। यो झाडी तल तन्तु गठन गर्न सुरु गर्दा वसन्त, मा बाहिर छ। प्रक्रिया को गर्मी मा बाहिर गर्न सकिन्छ। यस मामला मा हटाइएको र तन्तु फिक्का। यो दोस्रो फूल बढावा। बुश कडा हुर्किसकेका थिए भने, अतिरिक्त मार र पतन हटाइनु गर्न सकिन्छ। एकै समयमा, यस च्याउ प्रहार कि शाखा कटौती।
वसन्त छाँट्ने प्रक्रिया मा जाडो चिसो बाँच्न सकेन भनेर शाखा हटाउँदछ। यस्तो प्रक्रिया एक प्रशस्त फूल झाडी हासिल वा इच्छित आकार सिर्जना गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
को ब्रश पुरानो हो भने, तिनीहरू निकै 3-4 मृगौला मा कटौती। यो बोट कायाकल्प बढावा। यसलाई प्रशस्त फूल प्रदान गर्न आवश्यक छ भने, मार 5-7 तन्तु कटौती छन्। यस मामला मा बोट, सबै भन्दा सजावटी हुनेछ। कमजोर छाँट्ने गर्मी मा गरेको छ। पहिले नै फिक्का छ कि मार मात्र सुझावहरू हटाउँछ। छाँट्ने यस प्रकारको बढ्दै गुलाब को पहिलो केही वर्ष मा प्रयोग गरिन्छ। तर, यो यसको अन्य प्रजातिहरू पूरा गर्नुपर्छ। लगातार फूल गुलाब यो छाँट्ने को उचित संयोजन गरेर हासिल गर्न सकिन्छ।
которой позволяют дачникам определить целесообразность ее высаживания на своем участке, требует правильной защиты в зимний период. चढाई क्यासिनो समीक्षा गुलाब (फोटो हेर्नुहोस्। माथि) जो cottagers गर्न अनुमति दिन्छ आफ्नो साइट मा रोपण को सम्भाव्यता निर्धारण, को हिउँदमा उचित संरक्षण आवश्यक छ। उनको लुकाउने ठाउँमा भीड यो मूल्य छैन। संयंत्र -7ºS गर्न frosts सहनु गर्न सक्नुहुन्छ।
सम्हाल्नुभएको चिसो मौसम आश्रय को घटना मा वृद्धि ध्यान दिनुपर्छ। गुलाब समर्थन देखि हटाइनु पर्छ। थप झाडी आधार spud। यो गुलाब ब्रश FIR शाखा ढाक्न सबै भन्दा राम्रो छ। तिनीहरूले मार बीच, साथै बोट माथि राखिनेछ।
शाखा तार बनेको एक फ्रेम को शीर्ष मा सेट। यो 25-30 सेमी गरेर बोट माथि उठन गर्नुपर्छ। फ्रेम टास्ने गुणहरू इन्सुलेट सामाग्री र polyethylene फिल्म। तल तपाईं वेंटिलेशन लागि ठाउँ छोड्न आवश्यक छ। वातन उत्पादन वसन्त, छेउमा पर्खाल उठाने।
फिल्म प्रारम्भिक पर्याप्त हटाउन पर्छ। अन्यथा आश्रय नेतृत्व मा तापमान वृद्धि भएको मृगौला को विकास वृद्धि गर्न। देशमा अझै न्यानो समय थियो थियो भने, यो शीर्ष को दबाव गुलाब हुन सक्छ।
и требования к ее выращиванию, каждый садовод сможет украсить свой сад этим неповторимым по красоте растением. हो कि चढाई को hallmarks यसको बढ्दो आवश्यकताहरु क्यासिनो, समीक्षा र फोटो गुलाब सुविधाहरू विचार, हरेक माली यी अद्वितीय बिरुवाहरु सौन्दर्य आफ्नो बगैचा सजाउनु गर्न सक्षम हुनेछ। यसलाई पूर्ण परिदृश्य डिजाइन को कुनै पनि शैली वस्तुतः फिट। गुलाब क्यासिनो बगैचा सजावट रोमान्स र आकर्षण मा ल्याउँछ।
Zucchini Iskander: विशेषताहरु प्रजातिहरू समीक्षा
Honeysuckle "परी": विविधता, लाभ र बेफाइदा को विवरण
बकाइन: प्रजाति, प्रजातिहरू, खेती र छाँट्ने (फोटो)
त्यसैले महंगा Nolin: घर मा हेरविचार
Grudnichok grunts नाक: आधारभूत कारण र उपचार
कसरी घर मा छाला को बोसो सामग्री कम गर्न: प्रभावकारी तरिका, व्यञ्जनहरु र समीक्षा